Inona no nitranga tamin'ny Binance Exchange ary rehefa manomboka manao veloma - Blockchain News
Inona no nitranga tamin'ny Binance Exchange ary rehefa manomboka manao veloma
Na dia eo aza ny teny fikasana, Binance tsy mba aterineto maraina. Mihoatra noho ny andro lasa izay, Nanomboka ny asa ara-teknika momba ny tahiry fifanakalozana, izay ihany no tokony hitondra any amin'ny “fitontonganan'ny in vokatra vonjimaika,” saingy taty aoriana intsony ny asan 'ny fifanakalozana dia nitarika tamin'ny fe-potoana tsy voafetra ho. omaly, Binance Filoha Tale Jeneralin'ny Changpeng Jao ​​nanoratra tao amin'ny Twitter fa nisy ny olana amin'ny fandikana tsy nampoizina tahirin-kevitra, ary mitaky ny famerenana synchronization ny banky angona, izay maka ora maromaro.
amin'ny 8.00 in Berlin, Jao indray mandeha indray naneho hevitra mikasika ny toe-draharaha, milaza fa ny mpandraharaha miezaka fomba telo synchronization, samy hafa amin'ny hafainganam-pandeha: 1-2 ora, 5 ora sy 9 ora tsirairay avy. Tamin'izay fotoana izay dia mazava fa ny fifadian-kanina dia tsy fomba miasa. Araka ny vaovao farany, ny “angona farany fankatoavana” ankehitriny mitranga, ny resumption ny ara-barotra no andrasana amin'ny 15.00 amin'ny Berlin. Tao anatin'ny adiny iray alohan'ny tahiry fifanakalozana dia an-tserasera, mpampiasa dia ho afaka hanafoana baiko. Ankoatry ny, ny ekipa nanambara fa ho toy ny famantarana ny fankasitrahana ho an'ny “fanohanana mitohy”, ny fifanakalozan-kevitra dia hampihena ny asa nanirahana ny 0.03% isaky ny raharaham-barotra mandra-Febroary 24.
Na dia eo aza ny zava-misy fa efa imbetsaka Changpeng Jao ​​nilaza fa ny Exchange dia ivelany fotsiny noho ny asa ara-teknika, ary nandà ny mpijirika fanafihana, Mbola mpampiasa sasany mihevitra fa ny Hack. Manokana, fanehoan-kevitra avy amin'ny fifanakalozan-kevitra dia izay takian'ny John McAfee, nilaza fa “tsy misy orinasa efa niaiky ny mpijirika fanafihana mandra-dia voatery.” Omaly alina, McAfee nanoratra tao amin'ny Twitter fa izy “Tsy miezaka mamafy FUD,” fa mandray am-polony ny hafatra miaraka amin'ny vaovao momba ny fanapahana ny tahiry fifanakalozana. Ho an'ny lahatsoratra dia mifatotra Pikantsary, eo ambany izay, ambanin'ny Binance Logo, Miaiky ny fifanakalozana lazaina fa ny tenany dia nisy nanafika. Ary na dia misy olona manohana Makafi, maro no niampanga ny crypto sokafana manam-pahaizana ny vaovao sy ny porofo mampiahiahy: “Ny sary nalefan'ny sasany” mavo “vondrona – mba hizaha toetra ny zava-misy?”, “Tsy mbola nandre ny Photoshop? matotra, “” ianao ny fiarovana manam-pahaizana. ”
Makafi nisisika fa “manontany fotsiny ny fanontaniana” ary ho toy ny fiarovana manam-pahaizana dia mahafantatra fa “raha ny fanafihana no nitranga sy ny ezaka mba hiverina vola tsy nalaina avy hatrany, ny vintana ny hanavotana azy ireo dia nihena ho zero ny ao anatin'ny 24 ora.” Na izany aza, Binance CEO, izay namaly bitsika maro, fa ny rindrambaiko mbola “mizara FUD”, ary toky: “Dia hanaporofo fa ianao no diso.” Ho valin'ny amin'ny fiampangana, Binance nandefa bitsika tamin'ny mbola tsy BitCoins sy Ethereum adiresy:
Tsy miezaka hampiely FUD, fa izaho efa nandray am-polony maro ny tatitra tahaka ity iray ity. Fotsiny aho miezaka ny hahatakatra. Amin'ny maha-mpikaroka fiarovana, Fantatro fa mety hacks dia mora lavitra kokoa ny hamaha avy hatrany raha toa fanadihadiana. Andro tatỳ aoriana manandratra ny asa amin'ny alalan'ny baiko ny manitude. pic.twitter.com/u1PL9Z4tGf
— John McAfee (@officialmcafee) Febroary 8, 2018
Inona no nitranga tamin'ny Binance Exchange?
Ballyclare-monina Hag ...
Previous Post:Canadian crypto fifanakalozana Coinsquare manangana $ 30M
Next Post:Coincheck manambara refunds manomboka amin'ny herinandro ambony